पहिचान खोज्नेहरु कुइराको काग झै – U News7
पहिचान खोज्नेहरु कुइराको काग झै
November 10, 2016 March 18, 20170Comments
हामी के области गर्दै छौं ? हामी को हौं ? हामीले गर्नु पर्ने के हो ? हामीलाई हाम्रा शासक नेताहरुले कता लैजाँदैछन ? उनीहरुले हामीलाई लैजाँदै गरेको बाटो मूलबाटो हो कि चोरबाटो हो ? अरु कुरा नगर्ने हो भने पनि हाम्रा अग्रजहरुले लेखेर छोडिदिएको गलत इतिहासले हराइदिएको हाम्रो पहिचान(परिचय)सम्म त बल्लतल्ल खोज्न थालेका छौं, भने अब हामीले गर्नु पर्ने के ? तर हामी गर्दै छौ के ? हामी जे गर्दै छौं, हाम्रै लागि गर्दै छौं कि राष्ट्रका लागि वा शासक नेताहरुका लागि गर्दै छौं ?
जानेर वा Wholesale Jerseys नजानेर हो बल्ल पहिचान खोज्दै छौं । हामी एक–अर्काले एक–अर्कालाई तथानाम गाली गछौं । के अनादिकालदेखि नै हाम्रो पहिचान थिएन त ? थियो भने के थियो ? हामी cheap jerseys from china आफैले पहिचान गुमाएका हौं कि हाम्रो पहिचान अरुबाट गुमाइएका हौं ? हामीले खोजेको पहिचान कस्तो हो ? जात, भाषा, धर्मका आधारको परिचय या भूगोल, इतिहास, राष्ट्रियता र नागरिकता आदि इत्यादि ray bans sale के–के का आधारमा हामीले पहिचान खोजेका हौं ? कुन–कुन पहिचान हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ ? हामीले हाम्रो पहिचान शासक नेताहरुको सरकारसंग माग्नु पर्ने हो कि आफै कायम गराएर हाम्रो पहिचान यो हो भनेर सरकारलाई भन्नु hockey jerseys पर्ने हो ? हामीले पहिचान खोजेको धेरै भयो पाउन सकेका छैनौं । के कारणले पाउन नसकेको हो, कस्का गल्तिले पाउन oakley outlet नसकेको हो ? हामी पहिचान खोज्नेहरु नै कुइराको काग जस्तै अलमलिएका त होइनौं ?
← मेसिन मर्मत गर्न वीर अस्पतालले १५ करोड पायो
एनसेलले ल्यायो ‘रोमिङ् कम्बो प्याक’ →